TYBZ Motors Synchronous Motors - yareeyayaasha, dixiriga gooryaanka, gearboxyada dixiriga ah, sanduuqa meerayaasha meerayaasha, xawaare yareeyayaasha, kala duwanaanshaha, maareynta buugaagta, qalabka wax lagu beddelo ee loo yaqaan 'sprial bevel gear', gearboxes-yada beeraha, cagafyada gawaarida, qalabka xamuulka, dirxiga
Bogga ugu weyn / motor / TYBZ Motors isku dhafan
Sax sare ee xakamaynta xawaaraha : qalad gudaha 1/30000, taas oo hagaajinaysa tikniyoolajiyadda alaabada isticmaaleyaasha;
waxqabadka Sare : Rotor wuxuu isticmaalaa walxaha dhifka ah ee PM. Awoodda aagagga magnetic sare, Xuddunta bilowga weyn, bilowga yar, iyo xawaaraha ballaadhan;
Cabbir yar iyo miisaan fudud : Cabbirka qaabkiisu waa hal ilaa laba cabbir oo ka yar kan AC asynchronous motor ee isla HP ah;
Nidaam xakameyn fudud oo lagu kalsoonaan karo : Waxay isticmaashaa xakamaynta loop furan, taas oo yaraynaysa aagga suurtagalka ah ee cilladda iyo kharashka. Nidaamka xakamaynta tooska ah ee tooska ah oo ka kooban inverter iyo kumbuyuutar ayaa leh waxqabad ka fiican noocyada kale ee dhaq dhaqaaqa isbeddelka dhaqameed;
Awood sare oo hufan oo sare leh, oo wax ku ool ah keydinta tamarta : waa 5% ilaa 12% wax ku ool ah marka loo eego mootada asynchronous ee isla HP. Maaddaama mootadu aysan u baahnayn xiisaha xiisaha leh, cunsurku wuxuu ku dhow yahay1;
Cimri dherer : Iyadoo ay sabab u tahay hoos u dhaca kuleylka iyo yaraanta matoorka;
Dhignaashada : Waxay leedahay qaab dhismeed isku mid ah oo leh AC asynchronous motor waxaana loo isticmaali karaa in lagu beddelo motor asynchronous AC;
Codsashada ballaaran : Waxaa loo isticmaali karaa xaalado adag oo kala duwan. Xitaa waxaa loo isticmaali karaa meesha xawaaraha hoose ku socdo muddo dheer ama bilawga soo noqnoqda ayaa lagama maarmaan ah
TYBZ Motors isku dhafan Qaabka 45-71
No. nooca xoog
V inta jeer
TYBZ Motors isku dhafan Qaabka 80
Kordhinta salka bilaa cagaha iyo gaashaan birta leh (B5)
Saldhigga Buurta Flange Maya Poles Cabirka sii kordhaya Qiyaasaha guud
D E F G M N P R S T godadka flange AC AD HF L
Kordhinta salka cagaha iyo shaashadda leh flange (B35)
Saldhigga sii kordhaya Calanka No. Poles Cabirka sii kordhaya Qiyaasaha guud
A A / 2 B C D E F G H K M N P R S T godadka flange AB AC AD HD L
Kordhinta salka cagaha iyo muraayad aan lahayn flange (B3)
Cabirka sii kordhaya Qiyaasaha guud
Saldhigga sii kordhaya Poles A A / 2 B C D E F G H K AB AC AD HD L